Efere ụgbọelu ABF agwụla, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -agbasawanye ikike mmepụta ya - dịdị PCB, nrụpụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na -ebubata ya, onye na -emepụta ya
Obere ọkụ LED
PCB ọtụtụ akwa
PCB dị elu
Pigid Flex PCB
PCB pụrụ iche
» Blog » Efere ụgbọelu ABF agwụla, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -agbasawanye ikike mmepụta ya
Efere ụgbọelu ABF agwụla, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -agbasawanye ikike mmepụta ya
Site na uto nke 5g, AI na ahịa kọmpụta nwere arụmọrụ dị elu, ọchịchọ maka ndị na-ebu IC, ọkachasị ndị na-ebu ABF, agbawaala. Agbanyeghị, n’ihi oke ikike nke ndị na -ebubata ngwaahịa dị mkpa, ntinye nke ndị na -ebu ABF dị ụkọ, ọnụ ahịa ahụ na -aga n’ihu. Industrylọ ọrụ ahụ na -atụ anya na nsogbu nke nnyefe nke efere efere ABF nwere ike ịga n’ihu ruo 2023. N’ọnọdụ a, nnukwu osisi na -eburu efere na Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo na Zhending, ewepụtala atụmatụ ịgbasa efere ABF n’afọ a, yana mkpokọta mmefu ego nke ihe karịrị NT $ 65 ijeri na mpaghara osisi na Taiwan. Na mgbakwunye, ibiden na shinko nke Japan, Samsung moto South Korea na Dade elektrọnik agbasawanyela itinye ego ha na efere ABF.
Ọchịchọ na ọnụahịa nke ndị ọrụ ụgbọelu ABF na -arị elu nke ukwuu, ụkọ ahụ nwere ike ịga n’ihu ruo 2023
A na-emepụta mkpụrụ osisi IC dabere na bọọdụ HDI (bọọdụ sekit njikọta dị elu), nke nwere njirimara nke njupụta dị elu, nkenke dị elu, miniaturization na ịdị gịrịgịrị. Dị ka ihe etiti na-ejikọ mgbawa na bọọdụ sekit na usoro nkwakọ ngwaahịa mgbawa, ọrụ bụ isi nke bọọdụ ụgbọelu ABF bụ iji mgbawa rụọ njupụta dị elu na njikọta ngwa ngwa na mgbawa, wee jikọta ya na nnukwu bọọdụ PCB site na ahịrị ndị ọzọ. na bọọdụ ụgbọelu IC, nke na -arụ ọrụ njikọ, iji kpuchido iguzosi ike n’ezi ihe nke sekit, belata nchapu, dozie ọnọdụ ahịrị Ọ dị mma ka ikpo ọkụ nke mgbawa dị mma iji chebe mgbawa, yana tinyekwa ihe na -agafe agafe na arụ ọrụ. ngwaọrụ iji nweta ụfọdụ ọrụ sistemụ.
Ka ọ dị ugbu a, n’ọkwa nke nkwakọ ngwaahịa dị elu, onye na-ebu IC abụrụla akụkụ dị mkpa nke nkwakọ ngwaahịa mgbawa. Ihe data na -egosi na ugbu a, oke nke ndị na -ebu IC na ọnụ nkwakọ ngwaahịa ruru 40%.
N’ime ndị na -ebu IC, enwere ndị na -ebu ABF (Ajinomoto na -ewuli ihe nkiri) na ndị na -ebu BT dị ka ụzọ teknụzụ dị iche iche dị ka sistemụ resin CLL.
N’ime ha, a na -ejikarị bọọdụ ụgbọelu ABF maka ibe mgbako dị elu dị ka CPU, GPU, FPGA na ASIC. Mgbe emepụtasịrị ibe ndị a, ọ na -adịkarị mkpa ka etinyere ha na bọọdụ ụgbọelu ABF tupu enwee ike kpọkọta ha na bọọdụ PCB buru ibu. Ozugbo eburu ụgbọelu ABF gwụsịrị, ndị isi nrụpụta gụnyere Intel na AMD enweghị ike ịgbanahụ akara aka na enweghị ike ibupu mgbawa ahụ. Enwere ike ịhụ mkpa nke onye na -ebu ABF.
Kemgbe ọkara nke abụọ nke afọ gara aga, ekele maka uto nke 5g, igwe ojii kọmpụta igwe ojii, sava na ahịa ndị ọzọ, mkpa maka ibe kọmpụta arụmọrụ dị elu (HPC) abawanyela nke ukwuu. Tinyere uto nke ahịa maka ọfịs / ntụrụndụ ụlọ, ụgbọ ala na ahịa ndị ọzọ, agụụ maka CPU, GPU na ibe AI n’akụkụ ọnụ abawanyela nke ukwuu, nke kwalitekwara ọchịchọ maka mbadamba ụgbọelu ABF.
Category Blog (666) Ozi ụlọ ọrụ (2) Ngwaahịa (112) FR-4 PCB (21) HDI PCB (14) PCB dị elu (5) Ntughari IC (13) BGA (6) eMMc (1) Obere ọkụ LED (2) SiP (1) IC Test Board (4) PCwa Microwave (29) PCB ugboro ugboro dị elu (26) Rogers PCB (18) Taconic PCB (1) Telfon PCB (5) PCB ọtụtụ akụkụ (18) Mgbakọ PCB (12) Pigid Flex PCB (15) PCB pụrụ iche (11)